I-Roguebook: Ekugcineni Yethulwa i-PlayStation, i-Xbox kanye nenguqulo yokushintsha iyeza maduze! - Ukudlala
I-Roguebook: Ekugcineni Yethulwa i-PlayStation, i-Xbox kanye nenguqulo yokushintsha iyeza maduze!
Ukukhishwa kwe-Roguebook kwe-PlayStation, i-Xbox, kanye ne-Switch
I-Roguebook Yethula i-Trailer ye-PS5 & PS4
Abantu basendulo bakhuluma ngeNcwadi eyalotshwa kusukela ekuqaleni kwesikhathi futhi iqukethe zonke izinganekwane zomhlaba.
Le nsalela yalahleka emthonjeni eFaeria ngemva kwezigigaba eziningi ezimnandi, ezichazwe kabanzi encwadini ethi Faeria - Chronicles of Gagana.
Ngenxa yokusebenzelana kwayo nalo mthombo wemilingo, iNcwadi yasungula inkululeko yokuzikhethela embi futhi yaguqulwa yaba yiRoguebook!
Ikhasi ngalinye le-Book of Lore of Faeria linikeza isithiyo esisha lapho uzithola uvaleleke phakathi kwalo.
Kulo makhi wedeski elinjenge-rogue elakhiwe ngokubambisana no-Richard Garfield, umsunguli woMlingo: Umbuthano, uzoqondisa amaqhawe akho amabili ekunqobeni empini.
Hlanganisa ukusebenzisana okunamandla phakathi kwamakhadi, izinsalela, namakhono, bese ulungiselela ukubhekana neRoguebook!
Ngenxa yemvelo yayo eyingxubevange, i-Switch ibonakale iyinkundla enhle kakhulu yemidlalo yokwakha amadekhi, evamise ukulungela ngokulinganayo ukuqhuma okusheshayo ohambeni njengoba kufanele kumaseshini anwetshiwe ku-TV.
Phakathi kwemidlalo ezayo kukhona i-Roguebook, ezokhishwa ku-Nintendo Switch kule ntwasahlobo futhi idalwe i-Abrakam Entertainment (Faeria) enombono ovela ku-Magic: The Gathering co-create u-Richard Garfield, ophinde wasebenza njengomklami-ndawonye.
Ibilokhu itholakala ku-PC kusukela Ehlobo lika-2021, futhi manje isiyatholakala ku-PlayStation 4 naku-Xbox One, eyokugcina esebenza njengenkundla yokwethulwa kwe-Fugoro, umlingiswa omusha odlalekayo owethulwe emdlalweni.
Sekukonke, umdlalo uthole impendulo enhle kuwo I-Steam , futhi kungase kudingeke ukuthi kubhekwe lapho ekugcineni ithola indlela eya ku-Nintendo Switch ezinyangeni ezizayo.
Yilokho Konke Mayelana ne-Roguebook. Hlala ubukele ukuthola izibuyekezo eziningi futhi ubeke uphawu kusayithi lethu ukuze uthole izindaba ezengeziwe. Ngiyabonga Ngokufunda!
Iponi Lami Elincane: I-Maretime Bay Adventure - Usuku Lokukhishwa & I-trailer
I-Matchpoint – Umqhudelwano Wethenisi: Usuku Lokukhishwa
Abanikazi bamathikithi e-Las Vegas Bashiywe Ebumnyameni Ngenkathi u-Adele Ehlekisa Ngezindaba Ezimbi!
Uneminyaka emingaki u-Leorio ku-Hunter X Hunter? Kuchaziwe!